Madagascar Media • Malagasy 25 tapitrisa, 25 tapitrisan-kevitra vaovao
Accueil » Santé » Malagasy 25 tapitrisa, 25 tapitrisan-kevitra vaovao
Tontolo aorian’ny po-tany Covid-19
Ilaina ny manana fijery lavitra ary manombana sy mihevitra dieny izao izay rehetra mety hitranga rahampitso, izany no atao dia mba ahafahana mieritreritra sahady ny lalan-kombana amin’ny ho avy sy ny tontolo aorian’ny po-tany Covid-19. Raha mbola maro ny manahirana ny Malagasy amin’ny fiainana andavan’androny, mbola betsaka ireo sehatra samy hafa miandry fivoarana sy ilaina fanatsarana, ireny dia tsy misakana antsika hametraka ny fanontaniana hoe : tontolo sy fiarahamonina manahoana no miandry antsika rahampitso ?
Tsy azo lavina fa nihazakazaka ary mbola mitohy ireo fiovana nateraky ny po-tany Covid-19 teto amin’ity planetantsika ity. Irao taona monja, taorian’ny taona 2020, dia tsy nisy izay tsy nahita ireo fiovana goavana nateraky ny hamehana ara-pahasalamana, ny fihibohana ary ireo fepetra hentitra rehetra nentin’ny fitondram-panjakana, tsy ny any ivelany ihany fa ny eto Madagaikara ihany koa, hisorohana, hampihemorana ary hamongotana ny valan’aretina Covid-19. Voahozongozana na voaongotra mihintsy ny toekarena, mba tsy hilazana hoe maty ireo tontolon’ny asa maro be ho an’ny ankamaroan’ny sarambabem-bahoaka. Tsy tambo isaina ny voka-dratsin’ny Covid-19, litaniam-baovao tsy mahafaly. Manampy izany, rava sy miha-simba ihany koa ny tontolo iainana, ary tsy mitsaha-mitombo etsy sy eroa, maneran-tany ireo fitakian-jo hitovy ara-bolo-koditra, ara-toekarena, ara-pahasalamana, ara-pianarana, sy ara-pahamarinana. Manoloana ireny dia tsy azo atao ny miraviravy tanana, na miondri-dresy ka hanaiky hidonan’ny manjo raha tsy hoe tsy manan-tsaina afaka hieritreretana intsony angaha ka hiandry ho ampiana lava, ka zary ho lasa toetra raikitra ny mangata-dava sy miandry fanampiana.
Ao anatin’ny orana no mitsipelana ny avana, ary raha misy ny olana dia misy ny vahaolana miaraka aminy. Efa hita soritra tsikelikely izay mety ho endriky ny ampitso, hita manangasanga ary efa iainana sahady aza ny sasany amin’ireo fiovan’ny tontolo sy fiarahamonina misy antsika, toa tetezam-piovana mitondra antsika ho any amin’ny tontolo vaovao aorian’ny po-tany Covid-19 ireny. Iray amin’ireny ny fiboiboika sy firoboroboan’ny tontolo arakisa (numérique) izay maka toerana ary azo lazaina fa fiovana goavana dia goavana hitera-panavaozana sy mitaky fomba fiasa sy fisainana vaovao. Aiza ho aiza isika malagay amin’izany, hiandry izay havoakan’ny any ivelany foana ve ? Ilaina araka izany ny fijanonana hakana fisainana ny amin’izay rehetra tokony sy azo hatao, handrafetana tontolo sy fiarahamonina tsy tara fa mirindra ary mahaaraka ny fandehan’izao tontolo izao. Izany fironam-piovana izany anefa raha tsy voafehintsika dia midika ho tsy fvoarana sy tsy fandrosoana hanamboka-dratsy ho lovainjafy rahampitso.
Tontolo iainana sy ara-pahasalamana
Tsy ny fiovana arakisa ihany no mitranga fa ao koa ary tsara fotorina akaiky sy hamafisina ny fahatongavan-tsaina ny amin’ny tokony hiarovana ny tontolo iainana. Tsy tara isika Malagasy ary fa efa miroso amin’izany indrindra ao amin’ny tetikasa mendrika hoderaina Madagasikara rakotrala, Madagasikara maitso fa tsy ho nosy mena intsony. Mila dinihana ihany koa ny ara-pahasalamana, tokony hatao laharam-pahamehana. Famerenana ihany ny po-tany Covid-19, fa mbola misy ny valan’aretina hafa sy maro ho avy. Afaka misintona lesona marobe isika mikasika izay nety sy tsy nety tamin’ny fitantanana ny Covid-19, ho enti-manatsara hatrany ny fiainan’ny Malagasy. Mipetraka amin’ny Malagasy tsirairay avy ary indrindra ny ftondram-panjakana ny fanontaniana : inona no hataoko, sy azoko hatao hanatsarako ny tontoloko sy ny fiarahamonina misy ahy ? piti-kevitra kely iray monja dia ampy ary mety hody piti-kafo hitondra fiovana goavana sy fivoarana. Malagasy 25 tapitrisa, hevitra 25 tapitrisan-kevi-baovao. Inoanao ve ?